Qondaalli nageenyaa Qeellam Wallaggaa Aanaa Yamaalagii Walaliitti hidhattootaan ajjeefaman - BBC News Afaan Oromoo
Qondaalli nageenyaa Qeellam Wallaggaa Aanaa Yamaalagii Walaliitti hidhattootaan ajjeefaman
12 Adooleessa 2019
Goodayyaa suuraa Guyyaa kaleessa magaalaa Dambi Dolloo keessatti boombii darbatameen namoonni lama miidhamaniiru
Qondaalli nageenyaa Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Yamaalagii Walal keessa hojjetan tokko hidhattootaan ajjeefamu, maddeen mul'isan.
Gama kaaniin, boombii guyyaa kaleessaa magaalaa Dambi Dolloo ganda 07 jedhamu keessa darbatameen namoonni lama midhamuu qondaalli mirkaneessan.
Miidhaa dhaqqabe salphaa akka ta'eefi abbaan kana raawwate poolisiin qorataa akka jiru Hogganaan Itti - aanaa Bulchiinsaafi Nageenya godinichaa Obbo Mohaammad Boruu BBC'f mirkaneessaniiru.
Qondaaltota Godinaafi Aanichaa irraa BBCn dubbise akka mirkanneessanitti, ajjeechaan qondaala mootummaa guyyaa kaleessaa Aanaa Yamaalagii Walal keessa osoo Dambi Dolloodhaa galaa jiranu raawwatame.
Ajjeechaa kanas hidhattoonni kanaan dura dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo jala socho'aa turan raawwachuu isaanii Itti gaafatamaan Waajjira Bulchinsaafi Nageenyaa Aanichaa Obbo Asaffaa Maajor BBC'tti himaniiru.
''Qaamni yakka akkasii raawwataa jiru kuni ummata Oromoos waan bakka bu'u miti dhaaba bakka bu'us hinqabu,'' jechuun Obbo Mohaammad dubbatu.
Qondaalli maqaan isaanii Obbo Caalaa Nagarii jedhamaniifi hojjetaa nageenyaa ta'un hojjetan kuni, qondaala dhimmi nageenyaarratti muuxanno waggaa dheeraa qabanidha.
Qeellam Wallaggaa Muggiitti namoonni jaha ajjeefaman
''Obbo Caalaa yoo xiqqaate waggaa 12 ol nageenya keessa hojjetaniiru,'' kan jedhan Obbo Asaffaan, guyyaa har'aa owwaalchi isaanii magaala aanichaa kan taatee Tajjootti raawwachuu himaniiru.
Ajjeechaa kanaan walqabatee konkolaachisaafi gargaaraan isaa to'annoo poolisii jala akka jiran dhagahameera.
Akkaataa Itti ajjeefaman
Guyyaa kaleessaa waaree booda konkolaataa ummataatiin magaalaa Dambi Dolloorraa gara magaalaa aanichaa, Tajjootti osoo imalaniiti ajjeechaan kan raawwate.
Karaa gidduu bakka 'Tulluu Kormaa' jedhamutti hidhattoonni ummata gidduudhaa baasuun ajjeechaa akka irratti raawwatan qondaalli godinaafi aannichaa kun ni himu.
Obbo Mohaammad akka jedhanitti namoonni akkuma laga Hindinaa (bakka Tulluu Kormaa jedhamutti nama baasu) ol bahaniin hidhattoonni lakkoofsaan sagal tahan namoota lama konkolaataa keessaa buusani.
Lamaan keessaa tokko yeroo ajjeefamu miseensi poolisii tokko garuu lubbuun hafuu isaa himu. Miseensi poolisii kuni gargaarsa ummataan akka jalaa bahe himu qondaalli kuni.
Magaalli Tajjoo Dambi Dolloorraa 42km kan fagaatu yoo ta'u, bakki ajjeechaan kuni itti raawwate Tajjoo gahuuf 12km yeroo hafu akka ta'ee tilmaamamu hogganaan kominikeeshinii aanichaa BBC'tti himaniiru.
Ajjeechaan kunis battaluma konkolaataa keessaa fuudhaman akka raawwate kan shakkamu yoo ta'u, reeffi isaanii bakka butaman irraa osoo hin fagaatiin kaleessuma waaree booda argamus dabaluun himaniiru.
Wallagga Lixaatti namoonni ajjeefamuu jiraattonni himan
ABO: 'Boordii filannootti galmaa'uufi filannoo dhufuuf qophaa'aa jirra'
'Rasaasaan mataa keessa rukutamuu argine' jechuun hogganaan kominikeeshinii Aanaa Yamaalagii Walal Obbo Gizaaw Daadhii himu.
Ajjeechaan akkanaa aanicha kanatti yoo raawwatu kuni kan duraa miti kan jedhan, Itti gaafatamaan nageenyaa aanichaa Obbo Asaffaan, ajjeechaan walfakkaatu biraa baatii Ebla keessa raawwateera jedhaniiru.
Kunis, magaaluma Tajjoo keessa hojjetaan mootummaa biraa waajjiraa baafamee ajjeefamu BBC'tti himaniiru.
Ajjeechaa Qondaaltota mootummaa
Torban muraasa duras Itti gaafatamaan waajjira ODP Aanaa Sayyoo Obbo Nageessoo Aabbuu jedhaman osoo Finfinneedhaa galani Godinuma Qeellamiitti konkolaataa keessaa butamani ajjeefamani turan.
Isa dura rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaatti mudaten qondaaltonni hedduu ajjeefamu bulchitoonni naannoo Oromiyaa irra -deddeebbiin dubbatu.
Kanaan dura, pirezidantii Yunivarsiitii Dambi Dolloo, qondaaltota mootummaa, abbootii gadaafi hojjettoota baankii dabalatee butamanii beeku.
Ajjeechaafi buttaa qondaaltota mootummaa irratti irra deddebbiin Kibba Oromiyaattillee raawwatu mootummaan hidhattoota bosonatti hafan himata.
Ajjeechaa tibbanaa irratti miseensi waraana bosonatti hafe waan dubbate hin qabu.
Kanaan dura, abbootiin Gadaa Oromoo miseensota waraanaa dhaaba ABO jala turan ummatatti akka deebi'an waamicha dhiheessan sanatti, Aanaa Yamaalagii Walal keessaa garuu kan waamicha kana fudhate akka hin jirre Obbo Asaffaan Maajor BBC'tti himaniiru.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambi Dolloo shugguxiidhaan dhahaman
17 Waxabajjii 2019
15 Caamsa 2019
29 Caamsa 2019
6 Caamsa 2019
‘Aangoof dursa kennuutu Lixaafi Kibba Oromiyaatti rakkoo nageenyaa fide’
Waraanniifi mormitoonni Sudaan waliigaltee mallatteessan
'Naannoleen shan durumaa 'seeraan ala' walitti makaman'